काँच झैँ झर्‍याम्म फुटे मन ! | Nepal Flash
काँच झैँ झर्‍याम्म फुटे मन !
मानिसको चाहना असीमित हुन्छ । कुन सीमा नाघेपछि यो जीवको प्राप्तिको भोक मर्छ ? कल्पना गर्न कठिन छ । सहज हात लागेकालाई उपलब्धि मान्दैन । जे असम्भव छ, त्यसकै पछाडि दौडिरहन्छ । जमिनमा छरिएका हिरा टिप्दैन तर ताराको खोजीमा भड्किरहन्छ ।
आखिर जिन्दगीको अर्थ के हो ? मानिसको भोक र लोभको सीमा कहाँ समाप्त हुन्छ ?
धनको भकारी ? ब्रह्माण्डभन्दा विशाल माया–प्रेमको भण्डार ? चाकडीको चाङ ? केले रोकिन्छ मानिसको भोक ? अनि कसरी तृप्त हुन्छ, यो जन्तु ?
साह्रै खराब छ, यो प्राणी । जे छैन, त्यसैको चाह गर्छ । जे छ, त्यसलाई सधैँ नजरअन्दाज गर्छ । भर्‍याङमुनिको भगवान सधैँ हेपिन्छन् भने झैँ ।
यही संसारमा नाङ्गो पाइताला हिँड्दा रमाउने पनि धेरै छन् । अनि मखमलमा हिँड्दा पनि सधैँ उदास देखिने पनि पर्याप्त छन् । फाटेको भोटो–सुरुवात १० ठाउँमा टालेर लगाउँदा आफैँलाई संसार कै सबैभन्दा भाग्यमानी मान्ने पनि यही धर्तीमा छन् । अनि बर्साचीको सुटमा सजिँदा पनि आफैँलाई नाङ्गो देख्ने अनि आफ्नो आर्थिक अवस्थामा रोइलो गर्ने पनि यही भेटिन्छन् ।
एउटै माया मनमा सँगालेर त्यसलाई बाँच्ने आधार बनाउनेहरू पनि करोडौँ छन् । अनि दुई हातले सोहोर्दा पनि नसकिने माया–प्रेम पाउँदा पनि आफैँलाई अभागी सम्झने र इहलीलासम्म समाप्त पार्नेहरू पनि यही धर्तीमा जन्मिछन् ।
त्यसैले तृष्णाको कुनै अन्त्य छैन । प्राप्तिको चाह कहिल्यै मर्दैन । अनि सन्तुष्टिको मापन पनि केही हुँदैन । सुखको भोग कसैले मात्र एक मुस्कानबाट गर्न सक्छ अनि कसैका लागि हजारौँ चुम्बनबाट पनि मुस्कुराउने माध्यम बन्न सक्दैन । चाहनाको भ्रमै भ्रमले मत्ताएको छ, यो जीवलाई ।
मृत्यु कुनै कुराको प्राप्ति होइन । यो त अन्त्य हो । जान्दा जान्दै पनि मानिसहरू आफ्नै ज्यान समेत लिन पछाडि हट्दैनन् । अरूको हत्या गर्नेले त बरु केही उपलब्धिको आस राखेको हुनसक्ला । आत्महत्या गर्नेले त यस्तो मिठासपूर्ण जीवनको अन्त्य गरेर के नै पाउँछु भन्ने सोच्दो हो कुन्नि ? यो जवाफ असम्भव छ । ज्युँदासँग नहुने, मरेकाले दिन नसक्ने !
मानिसको मन के चाहन्छ र के गर्दा खुसी हुन्छ भन्ने कुनै अध्ययन र तथ्याङ्कमा भेटिँदैन । तरपनि, सबैभन्दा ठुलो कुरा भोक नै रहेछ । मानिस मरे पनि खाएर नै मर्न चाहँदो रहेछ, भोको पेट मर्ने चाहना कसैको हुँदैन रहेछ । तर, मानिसलाई जहिले भोको मरिँदैन भन्ने लाग्न थाल्छ, उसको चाहना पनि विस्तारित हुन थाल्दो रहेछ ।
लाग्छ, मानिसको मर्ने चाहनाको अगाडि काल पनि बाधक बन्न नसक्दो रहेछ । नचाहँदा नचाहँदै कति जनालाई आफ्नो पासोमा पार्नै पर्ने । कति माया लाग्दा अनुहारलाई पनि, कति खाउँखाउँ र लाउँलाउँ भन्ने उमेरकालाई पनि । लाखौँका माया र अपार धन भएकाले मर्ने चाहना गर्दा पनि किन मर्नु पर्‍यो र ? भनेर सोध्दा पनि सोध्दैन रहेछ । मर्दिन भन्नेलाई जीवनदान पनि दिन सक्दैन रहेछ । मेसिन जस्तै हुँदो रहेछ, काल । कसैको इसारामा चल्ने । विवेकशून्य ।
नेपालमा मात्र दुई जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिँदा सारा मुलुक आफैैँ बन्द भयो । सरकारले लकडाउन गर्‍यो । तर, जब लकडाउनले भोकलाई जित्न सकेन तब सारा मानिस जबरजस्ती आफ्नो काममा फर्किए । जब लकडाउन सुरु गरियो तब कोरोना सङ्क्रमण र फैलावटको दर निकै कम थियो । अनि, नागरिकको बलजफतीपछि सहर खुल्दै जाँदा, आवागमन बाक्लिँदै जाँदा सङ्क्रमणको सम्भावनाको दर पनि बढेको छ । तर, हाम्रो मर्ने भयको डर कम भएको छ ।
त्यसैले मानिसको मन के चाहन्छ र के गर्दा खुसी हुन्छ भन्ने कुनै अध्ययन र तथ्याङ्कमा भेटिँदैन । तरपनि, सबैभन्दा ठुलो कुरा भोक नै रहेछ । मानिस मरे पनि खाएर नै मर्न चाहँदो रहेछ, भोको पेट मर्ने चाहना कसैको हुँदैन रहेछ । तर, मानिसलाई जहिले भोको मरिँदैन भन्ने लाग्न थाल्छ, उसको चाहना पनि विस्तारित हुन थाल्दो रहेछ ।
मनले भन्दा पनि मस्तिष्कले चाहेको चाहना पुरा गर्न मानिस जुनसुकै उँचाइ र गहिराइसम्म पुग्न सक्दो रहेछ । मरेर भए पनि । अनि जतिसुकै महान र नीच पनि बन्न सक्दो रहेछ । हात नलाग्दा ज्यान फाल्न पनि पछि पर्दैन रहेछ । शायद त्यतिबेला उसले सोच्दैन अरू चाहना गर्न लायक कुरा यो संसारमा असङ्ख्य छन् । एउटा असफलताले जिन्दगीको अन्त्य गर्नु महापाप हो । तर, कसैले सोच्दैनन् रहेछन् ।
कसको काया कुन बेला, कसरी लासमा परिणत हुन्छ, कसैलाई थाहा छैन । जबसम्म श्वास छ, हाँस्ने कोसिस गर्नु पर्छ । जब मन रमाउँछ तब न आउँछ, जिउनुको मजा । मन जेमा र जसरी रमाउँछ, त्यो गर्न पाउनु वा त्यसको चाहना राख्नु पाप होइन । एउटा चाहना पुरा नभए अर्को चाहना मनमा डुबाउन सक्ने मानिस नै जीवनमा सफल हुन्छ कि जस्तो पनि लाग्छ ।
यो संसारमा आत्महत्याको दर निकै छ । कोही भोको पेटले दिने पीडालाई सहन नसकेर जीवन फाल्छन् त कोही मायाले अतृप्त भएर । मानिसले विपरीत लिङ्गीको शरीर र रूपप्रति आशक्ति देखाउँछ भने त्यसलाई माया भन्न सकिँदैन । त्यही शरीर आफ्नो बनाउन नसक्दा आफैँलाई मार्नेसम्मको महापाप गर्नेहरूलाई मैले कहिल्यै सम्मानको नजरले हेर्न सकिनँ पनि । मन जित्न खोज्नेले त प्रेयसीबाट केही पाउने आसा राख्दैन । बस्, माया मात्र गरिरहन्छ । प्रेयसी आफ्नै अँगालोमा हुँदा होस् वा अरू कसैको । आफैँ हार्दा पनि कहिल्यै हारेको महसुस गर्दैन । बस्, गर्छ त प्रेम । निरन्तर प्रेम ।
मलाई आफ्नो होस् वा पराइ । हरेक मृत्युले आँखा रसाउन बाध्य पार्छ । तर, आत्महत्या गर्नेप्रति भने कहिल्यै सहानुभूति जागेन । त्यसमाथि प्रेममा धोकालाई कारण बनाएर मर्नेहरू त सधैँ मेरा घृणाको परिधिभित्र मात्रै रहे । तिनीहरूलाई मरेपछि पनि प्रेमका भगवानले पनि शरण दिँदैनन् जस्तो लाग्छ ।
मायामा धोका त खाइन्छ नै । आखिर शीतलता छर्ने हावाले नै हुँडरी पनि ल्याउने न हो । समयसँगै जसरी हुँडरी र त्यसले दिएको विध्वंसका चोटबाट पार पाइन्छ, त्यसरी नै धोका खाएर फाटेका मनलाई पनि समयले पुर्छ नै, अवश्य । बस्, चाहिन्छ त, धैर्य गर्नसक्ने मानसिक शक्ति ।
जीवनमा मानिसले सधैँ एकोहोरो प्रेम मात्र पाउनै सक्दैन । चाहे पत्नीबाट हाेस् वा प्रेमिकाबाट । भनाभन र धोका बिनाको जीवन त अमिलो हुन्छ कि जस्तो पो लाग्छ । जिन्दगी त आखिर पहाड न हो, उतार चढाव त आइ नै रहन्छन् । जिन्दगीमा सहेका पीडा र घाउको सम्झनाले मनलाई कहिल्यै रुवाउँदैन । बरु हाँसेर बाँच्ने आधार दिन्छ । जिन्दगीमा धोका त कति खाइयो, खाइयो । दिइयो पनि । साथीभाइबाट पनि प्रेममा पनि । दुईतर्फी मायामा मात्र होइन एकतर्फीमा पनि । जब धोका पाइएको पक्का हुन्थ्यो मन केही गह्रुङ्गो त भई हाल्थ्यो । अनि गाइन्थ्यो, केही दिन विरहका गीतहरू । फेरि चल्थ्यो नै जिन्दगी आफ्नै गतिमा ।
मलाई त किन हो किन प्रेममा भन्दा साथीभाइले दिएका धोकाले बढी मन पोल्छ । ती धोका सम्झँदा भने आँखा रसाएर आउँछन् । तर, मायामा पाइने धोका त मस्तिष्कमा हुने हलचल मात्र हुँदा रहेछन् । विश्वासको गाँठोभन्दा पनि दुई विपरीत लिङ्गीलाई एक अर्काको शरीरको आकर्षणले तान्ने बहाना मात्र । जसले जे भने पनि दुई विपरीत लिङ्गीले (अहिले त समलिङ्गी पनि) एक अर्काप्रति राख्ने अथाह चाहको सीमा आखिर यौनाङ्ग मै गएर टुङ्गिने त रहेछ । अन्तिम चाहना त त्यही हुँदो रहेछ, बाँकी सबै भन्ने कुरा मात्र । प्रेमका कसम त दुई मनलाई बहलाउने भ्रम मात्र ।
मेरा लागि जिन्दगीमा दुई सन्तानमाथि पोख्याउनेभन्दा मायाको अर्को सीमा छैन । जिन्दगीमा ठोक्किएका मायाका अन्य परिभाषा त बाँच्नका लागि तयार पारिएका ढोँग मात्र रहेछन् । हो, आमा–बाबुका आँखामा तैरिने मायाका सागरभन्दा गहिरो पनि केही हुँदैन जस्तो लाग्छ ।
जिन्दगी हो । क्षणभरमा पलाउने अनि निमेषभरमा तोडिन सक्ने प्रेमका लागि कहिल्यै ज्यान फाल्न सकिँदैन । प्रेम त भगवानको वरदान हो । जसले यो सृष्टिको रचना गरे उनकै वरदानको अवमूल्यन गर्ने अधिकार पनि कसैलाई हुँदैन । तर, हिजोआज प्रेमका खातिर देह त्याग गर्ने दुष्प्रयास भयावह रूपमा भइरहेको छ ।
एउटा प्रेमका लागि जसले ज्यानै फाल्छ, त्यो संसारको सबैभन्दा मूर्ख जस्तो लाग्छ । हो, जीवनमा आमा–बाबु र सन्तान फेर्न सकिँदैन । बाँकी सम्बन्ध त आफ्नै रोजाइमा भर पर्छन् । मन परे कायम राख्ने, नत्र आफ्नै बाटो तताउने ।
बादल न थिएँ । कहाँ सुदूर भविष्यको वाचा गर्न सक्थेँ र ? जसरी बादललाई निमेषभरमा आफ्नो स्वरूप कस्तो बन्छ भन्ने थाहा हुँदैन, त्यसरी नै मेरो मन भोलि कहाँ ठोक्किने हो ? मलाई पनि कसरी थाहा हुन सक्थ्यो र ? त्यसैले गरिन वाचा ।
जिन्दगीमा ठोक्किने सम्बन्धहरू प्रशस्त छन् । जति छन्, त्यतिसँग मन मिलाउन सके पनि पर्याप्त हुन्छ । अहिले लाग्छ, बस् कसैको चित्त दुखाउन हुँदैन । कसैको मन दुखाउन हुँदैन । बस्, आफू हाँसेर अरूलाई पनि हँसाउन सकियो भने जिन्दगीमा त्योभन्दा ठुलो उपलब्धि र प्राप्ति अरू केही हुन सक्दैन । दुई जनाले प्रशंसा गरुन्, त्योभन्दा ठुलो धन केही हुन सक्दैन । अनि सन्तानका आँखामा देखिने सन्तुष्टिभन्दा ठुलो सन्तुष्टि कुनै हुँदैन ।
एउटी थिइन् । घरमा फोन गरेर मर्ने, बाँच्ने कसम खान्थिन् तर, अगाडि आउन सधैँ हिचकिचाउने । परिचित पनि थियौँ, हामी एक अर्कासँग । दुवैलाई थाहा थियो, कोसँग गफ गर्दै छौँ भन्ने । ‘ब्लफ कल’ मात्र थिएन, त्यो । वास्तवमा उनका लागि माया कै अर्को रूप थियो, त्यो । मैले चाहेको भए उनीलाई आफ्नो बनाउन सक्थेँ । तर, मैले त्यो दिन र आज पनि ती फोनमा गरिएका कुराकानीलाई मजाकमा मात्र लिएँ । शायद अहिले उसले पनि । उनको विचार मेरो परिवारले हाम्रो सम्बन्ध कहिल्यै स्विकार्दैन भन्ने रहेछ । मैले जसरी पनि आफ्नो बनाउँछु भनेर वाचा गरेको भए हाम्रो प्रेम प्रगाढ बन्न सक्थ्यो । तर, फोनमा जति प्रेमका भाव पोखेर नाटक गरे पनि उनको मनले मेरो मनमा बास पाउन सकेको थिएन ।
बादल न थिएँ । कहाँ सुदूर भविष्यको वाचा गर्न सक्थेँ र ? जसरी बादललाई निमेषभरमा आफ्नो स्वरूप कस्तो बन्छ भन्ने थाहा हुँदैन, त्यसरी नै मेरो मन भोलि कहाँ ठोक्किने हो ? मलाई पनि कसरी थाहा हुन सक्थ्यो र ? त्यसैले गरिन वाचा । मेरो मन उसलाई स्विकार्न तयार पनि थिएन । त्यो बेला एउटा मन मेरै कारणले फाट्यो । तर, कसम त्यो ‘फोन लभ’ का लागि कहिल्यै गीत गाइएन । कहिल्यै एक पेग लगाइएन ।
अहिले भेट हुँदैन । शायद भेट भए दाइ भनेर सम्बोधन गर्छिन् होली । जिन्दगीको स्क्रिप्ट नै अजिब पाराले लेखिएको हुन्छ ।
अनि अर्की थिइन्, एक सुन्दरी । आफ्नै घरभन्दा केही परकी । उमेरमा मभन्दा केही जेठी पनि थिइन् । तर, माया न हो, कहाँ उमेर हेर्छ र ? महिनौँ आँखा जुधे । त्यही जुधाइ मै लाग्न थाल्यो । दुईतर्फी माया बसेछ भन्ने । आँखा जुधेका केही दिनपछि मलाई देख्दा मुस्कुराउन पनि थालिन् । अनि के चाहियो र ! उनका अनुहार मेरा आँखा अगाडि नाच्दा पनि मायाको सागरमा डुबिन्थ्यो । उनलाई बोकेर बादलदेखि बादलसम्मको शयर गरिन्थ्यो । तारा टिपेर उनको कपाल सिउरिन्थेँ । बादलभन्दा पनि मुलायम लाग्थे, उनका कपाल । सम्झनामा । अनि गुनगुनाइन्थ्यो, अरुण थापाका गीत । उनको काखमा सुतेर,
‘ तिमी हरियाली वसन्त हौँ,
नदीहरूमा तिमी पवित्र गङ्गा हौँ !’
लाग्थ्यो, त्यो गीत मेरै लागि रचिएको हो । तर, पनि आफ्नो मायालाई सपनामा बाहेक कहिल्यै पोख्न सकिन, उसका सामुन्ने । समय न हो, बग्दै जान्छ । समय र नदीको वेगलाई कसले पो रोक्न सकेको छ र मैले रोक्न सक्थेँ भन्नु । एक दिन उसले किनमेल गर्दै गरेको पसलमा छिरेँ । अलि नजिकबाट हेर्ने लालसाले । सामान छाने जस्तो गरेँ । उसले पनि हेरिन, फेरि मुस्काइन् ।
त्यो दिन उसले मसँग खुलेरै कुरा गरिन् । घर, परिवार सबैको बारेमा चासो देखाइन् । लाग्यो, मेरो प्रेम साकार हुँदैछ । अलि अगाडिसम्म एकसाथ हिँडियो पनि । अनि बिदा भइयो । बिदा हुने बेला उनको ओठबाट निस्किएको शब्दले मेरो शरीरलाई चिसो बनाइ दियो । शरीरका रगत विपरीत दिशामा बग्न थाले झैँ भयो । मन र मस्तिष्क एक आपसमा जुधेर ठुलै दुर्घटना घटे जस्तो लाग्यो । हृदयमा चट्किएको चट्याङले मस्तिष्कलाई नै हुँडल्यो । न हिँड्न सकेँ नत टुक्रुक्क बाटैमा बस्न नै । त्यस बेला उनले बोलेको दुई शब्द नै मेरा मनमा पहिरो ल्याउन, पर्याप्त थियो ।
‘बाइ भाइ !’
मन काँच झैँ झर्‍याम्म फुटे । हामीले नाच्ने बादल झरी बनेर आँखाबाट टप्किए ।
चिसिएका मनका तापक्रमलाई घरमा आएर सन्तुलनमा पुर्‍याएँ । लाग्यो, जे भने पनि ‘भाइ’ भनेर सम्बोधन नगरिदिएको भए हुन्थ्यो । भोलिदेखि पनि बाटोमा उनीसँग देखादेख हुन्थ्यो नै । तर, उनको मुस्कान मेरा लागि बिरानो झैँ लाग्न थालिसकेका थिए । शायद त्यो दिन नबोलेको भए मनले चञ्चल हुने बहाना त पाइरहन्थ्यो ।
हैट ! कस्तो मायाका लागि महिनौँ बरबाद गरिएछ । बस्, खुसी लाग्यो एउटै कुरामा । मैले मेरा सपनाका कुरा कसैलाई सुनाएको थिइन । नत्र कति गिज्याउँथे होलान्, साथीभाइले ? आज सोच्दा हाँसो मात्र उठ्छ ।
मन त हावाभन्दा चञ्चल हुन्छ । कसैको वशमा नबस्ने । मेरो मन पनि कहाँ बस्थ्यो र । सपना मै सही गीत गाउने एउटा बहाना त चाहिन्थ्यो नै । लाग्यो, अर्कैको खोजीमा । लाग्यो, मर्नका लागि यस्ता बहाना सही होइनन्, विकल्प त वरिपरि अरू पनि भेटिन्छन् नै । सही भनेका थिए, मुन्ना भाइले
‘सपना टुटा हे तो दिल कभी जलता हे,
हाँ थोडा दर्द हुवा पर चलता हे !’